မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်မူတွေ ပိုများလာပြီး၊ အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်မူတွေဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းမျိုးစုံရှိရာမှာ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြောင့် အများစု (၉၀% ခန့်) ဖြစ်ရပြီး၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိတ်ဖောက်ပြန်တာ၊ အရက်နဲ့မူးယစ်ဆေးစွဲတာ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြဿနာတွေ အဓိက ပါဝင်ပါတယ်။ အခြားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ နာတာရှည်ရောဂါ (ဥပမာ - ကင်ဆာ၊ ကုရခက်၊ ကုလို့မပျောက်နိုင်တဲ့ရောဂါမျိုး) နာကျင်မူဝေဒနာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရတဲ့ရောဂါ၊ လူမူရေးပြဿနာ၊ စီးပွားရေးပြဿနာနဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အခက်အခဲပြဿနာတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို အဆုံးစီရင်တာတွေကို လျော့ချနိုင်ဖို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့အညီ ဦးဆောင်မူကဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ အဓိကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဒီပြဿနာဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေတာကို လက်ခံဆုံးဖြတ်ပေးပြီး၊ စိတ်ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့နဲ့အတူ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို နည်းလမ်းတွေဖော်ထုတ်ရာမှာ မျှော်မှန်းချက်ထားရှိတာ (ဥပမာ ဘယ်နှစ်နှစ်အတွင်း ဘယ်လောက် လျော့ချမလဲ)၊ ဘာတွေကြောင့်အဓိက ဖြစ်တာ (ဥပမာ - အဓိကဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါတွေ) ကို ရှာဖွေ၊ ကုသ၊ ကာကွယ်ပေးတာ နဲ့ အခုလိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုလည်း ရှာဖွေပြီး (ဥပမာ ဆေးဝါးအလွန်အကျွံသုံးတာ) လိုအပ်တဲ့ တားဆီးမူတွေ လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းတွေကို တာဝန်သိသိ သတင်းရေးထုတ်ပြန်ပေးပြီး၊ ကာကွယ်ရေးပညာပေးတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကာကွယ်တားဆီးမူတွေကို လူငယ်ဘဝကတည်းက လူကြီးအထိ ဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်မှာ လုပ်သွားနိုင်အောင်၊ ကျောင်းကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ စိတ်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးသင့်ပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုလည်း စောစောသိ၊ စောစောကုသပေးကာ၊ လိုအပ်တဲ့နေရာကိုလွှဲပေးနိုင်အောင် ကျန်းမာရေးစနစ် ပိုအားကောင်းလာဖို့ လိုပါတယ်။ အခုလို ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေ ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပေးမှသာ ဒီပြဿနာကို လျော့ချနိုင်မှာပါ။
လူနာတွေဖက်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်နိုင်တဲ့ ကြိုတင်လက္ခဏာတွေကို သတိပြု၊ စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေကတော့ အဆုံးစီရင်ဖို့အတွေး ပေါ်လာတာကို ဖွင့်ပြောတိုင်ပင်တတ်တာ၊ အပြောအဆို အပြုအမူ စိတ်ခံစားချက် ရုတ်တရက်ပြောင်းလာတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြောအဆိုပြောင်းလာရာမှာ ဥပမာ မနေချင်တော့တာ၊ နေရတာ အဆင်မပြေတာ၊ အားလုံးအတွက် ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာတယ်လို့ ခံစားလာတာ၊ တခြားလွတ်မြောက်ရာနည်းလမ်းနဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားလာတာ၊ အသက်အန္တရာယ်ထိအောင်လုပ်ချင်လာတာ စတာတွေကို ထုတ်ပြောလာတတ်ပါတယ်။ အပြုအမူ ပြောင်းလာရာမှာလည်း၊ ယခင် အရက်၊ မူးယစ်ဆေး မသုံးသူတွေအနေနဲ့ စ သုံးလာတာ၊ ယခင်သုံးပြီးသားသူတွေအနေနဲ့လည်း ပိုသုံးလာတာ၊ လူတွေနဲ့ ရောရောနှောနှော မနေတော့တာ၊ တချို.မှာ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို လိုက်ပြော၊ နှုတ်ဆက်တာ၊ တန်ဖို့းရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ပေးလိုက်တာ၊ အဆုံးစီရင်ဖို့နည်းလမ်းတွေကို စဉ်းစားရှာဖွေလာတာ စတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ခံစားချက်ပြောင်းလာရာမှာတော့ စိတ်ဓာတ်ကျလာတာ၊ စိုးရိမ်စိတ်များလာတာ၊ အရင်လုပ်နေကျ အလုပ်အပေါ် စိတ်မဝင်စားတော့တာ၊ စိတ်တို ဒေါသကြီးတာ စတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ တချို. စိတ်ကျရောဂါရှိနေပြီးသူမှာတော့ အဆုံးစီရင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချအပြီး၊ ရုတ်တရက်ပြောင်းသွားတာက၊ ချက်ချင်းပုံမှန်ပြန်ကောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်း ပြတတ်ပါတယ်။ အခုလို ကြိုတင်လက္ခဏာတွေပေါ်လာချိန်မှာ အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခြင်းအားဖြင့် ခံစားနေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို တကယ်တမ်း မှန်မှန်ကန်ကန် မဖြေရှင်းနိုင်တာကို အသိဝင်ဖို့ပါ။ ပြဿနာက ခုလိုကျဉ်းထဲကြပ်ထဲရောက်ချိန်မှာ လူနာအနေနဲ့ ဆက်နေမလား၊ မနေဘူးလားဆိုတဲ့ အဖြူအမဲသဘော (၂) လမ်းကိုဘဲ စဉ်းစားမိလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ (၂) လမ်းကြားထဲမှာ သင့်တော်မှန်ကန်တဲ့ အခြားနည်းလမ်းတွေရှိနေသေးတာကို စဉ်းစားရ ကြပ်နေတတ်တာမို့၊ အခုလိုအခက်အခဲဖြစ်လာချိန်မှာ ဖွင့်ဟတိုင်ပင်နိုင်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ အထူးအရေးကြီးပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့လည်း လူနာအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး၊ အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာ ရှိနေတယ်လို့ သံသယရှိလျှင် (သို့မဟုတ်) စိတ်ကျရောဂါ ရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ်လျှင် တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေနဲ့ ပြသ၊ ကုသမူခံယူနိုင်ဖို့ ဖေးမကူညီ ဖျောင်းဖျပေးသင့်ပါတယ်။ တချို.လူနာတွေမှာ တခြားလူတွေသိကုန်မှာစိုးပြီး နောက်တွန့်ကာ ကုသမူမခံယူလျှင် အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်သည်အထိ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလူနာတွေမှာ အထက်ဖော်ပြပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်စေနိုင်တဲ့ အခြားအကြောင်းရင်း ပြဿနာတွေရှိနေလျှင်လည်း လိုအပ်သလို ပံပိုးကူညီပေးသင့်ပါတယ်။ လတ်တလော အဆုံးစီရင်ဖို့ ရှိလာလျှင်လည်း ဖျောင်းဖျပေးတာ၊ တားဆီးပေးတာ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မူ ရနိုင်တဲ့နေရာခေါ်သွားပေးတာ၊ ပိုလိုအပ်တဲ့ အကူအညီပေးတာတွေ လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အခုလို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အဆင့်မရောက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ စိတ်ကျန်းမာရေး အထူးကုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ စိတ်ကျန်းမာပညာအဖွဲ့၊ ရွေးကောက်ခံ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာစိုးမင်း ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို အဆုံးစီရငျမူတှေ ပိုမြားလာပွီး၊ အားလုံးပူးပေါငျးဆောငျရှကျကွဖို့ အရေးကွီးတယျလို့ ကနျြးမာရေးပညာရှငျတှကေ ဆိုပါတယျ။
ကိုယျ့ကိုယျကို အဆုံးစီရငျမူတှဖွေဈစတေဲ့ အကွောငျးရငျးမြိုးစုံရှိရာမှာ စိတျကနျြးမာရေးပွဿနာတှကွေောငျ့ အမြားစု (၉၀% ခနျ့) ဖွဈရပွီး၊ စိတျဓာတျကတြာ၊ စိတျဖောကျပွနျတာ၊ အရကျနဲ့မူးယဈဆေးစှဲတာ၊ ကိုယျရညျကိုယျသှေးပွဿနာတှေ အဓိက ပါဝငျပါတယျ။ အခွားဖွဈစတေဲ့အကွောငျးရငျးတှကေတော့ နာတာရှညျရောဂါ (ဥပမာ - ကငျဆာ၊ ကုရခကျ၊ ကုလို့မပြောကျနိုငျတဲ့ရောဂါမြိုး) နာကငျြမူဝဒေနာ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ခံစားရတဲ့ရောဂါ၊ လူမူရေးပွဿနာ၊ စီးပှားရေးပွဿနာနဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာ အခကျအခဲပွဿနာတှကွေောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
အခုလို အဆုံးစီရငျတာတှကေို လြော့ခနြိုငျဖို့ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ နညျးလမျးတှနေဲ့အညီ ဦးဆောငျမူကဏ်ဍမှာရှိနတေဲ့ အဓိကတာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့ ဒီပွဿနာဖွရှေငျးဖို့လိုအပျနတောကို လကျခံဆုံးဖွတျပေးပွီး၊ စိတျကနျြးမာရေးကြှမျးကငျြသူတှနေဲ့ ပုဂ်ဂလိကကဏ်ဍတို့နဲ့အတူ ဖွရှေငျးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးတှကေို ပူးပေါငျးဖျောထုတျဖို့ အရေးကွီးဆုံးဖွဈပါတယျ။ အခုလို နညျးလမျးတှဖေျောထုတျရာမှာ မြှျောမှနျးခကျြထားရှိတာ (ဥပမာ ဘယျနှဈနှဈအတှငျး ဘယျလောကျ လြော့ခမြလဲ)၊ ဘာတှကွေောငျ့အဓိက ဖွဈတာ (ဥပမာ - အဓိကဖွဈစတေဲ့ ရောဂါတှေ) ကို ရှာဖှေ၊ ကုသ၊ ကာကှယျပေးတာ နဲ့ အခုလိုလုပျဆောငျခဲ့တာတှအေပျေါ ပွနျလညျသုံးသပျတာတှေ လိုအပျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကိုယျ့ကိုယျကို အဆုံးစီရငျရာမှာ အသုံးပွုတဲ့ နညျးလမျးတှကေိုလညျး ရှာဖှပွေီး (ဥပမာ ဆေးဝါးအလှနျအကြှံသုံးတာ) လိုအပျတဲ့ တားဆီးမူတှေ လုပျပေးဖို့လိုပါတယျ။ သတငျးမီဒီယာတှအေနနေဲ့လညျး ကိုယျ့ကိုယျကို အဆုံးစီရငျခွငျးဆိုငျရာ သတငျးတှကေို တာဝနျသိသိ သတငျးရေးထုတျပွနျပေးပွီး၊ ကာကှယျရေးပညာပေးတှေ လုပျပေးသငျ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကာကှယျတားဆီးမူတှကေို လူငယျဘဝကတညျးက လူကွီးအထိ ဖွဈစဉျအဆငျ့ဆငျ့မှာ လုပျသှားနိုငျအောငျ၊ ကြောငျးကနျြးမာရေးလုပျငနျးစဉျမှာ စိတျကနျြးမာရေးကဏ်ဍနဲ့ ပွဿနာဖွရှေငျးတဲ့ နညျးလမျးတှကေို ထညျ့သှငျးသငျကွားပေးသငျ့ပါတယျ။ အဓိက အကွောငျးရငျးဖွဈတဲ့ စိတျကနျြးမာရေးပွဿနာတှကေိုလညျး စောစောသိ၊ စောစောကုသပေးကာ၊ လိုအပျတဲ့နရောကိုလှဲပေးနိုငျအောငျ ကနျြးမာရေးစနဈ ပိုအားကောငျးလာဖို့ လိုပါတယျ။ အခုလို ကဏ်ဍပေါငျးစုံကနေ ဝိုငျးဝနျးလုပျဆောငျပေးမှသာ ဒီပွဿနာကို လြော့ခနြိုငျမှာပါ။
လူနာတှဖေကျကနေ ကာကှယျပေးနိုငျဖို့အတှကျလညျး ကိုယျ့ကိုယျကိုအဆုံးစီရငျနိုငျတဲ့ ကွိုတငျလက်ခဏာတှကေို သတိပွု၊ စောငျ့ကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ ဒီလက်ခဏာတှကေတော့ အဆုံးစီရငျဖို့အတှေး ပျေါလာတာကို ဖှငျ့ပွောတိုငျပငျတတျတာ၊ အပွောအဆို အပွုအမူ စိတျခံစားခကျြ ရုတျတရကျပွောငျးလာတာတှေ ဖွဈပါတယျ။ အပွောအဆိုပွောငျးလာရာမှာ ဥပမာ မနခေငျြတော့တာ၊ နရေတာ အဆငျမပွတော၊ အားလုံးအတှကျ ဝနျထုတျဝနျပိုးဖွဈလာတယျလို့ ခံစားလာတာ၊ တခွားလှတျမွောကျရာနညျးလမျးနဲ့ ပွဿနာဖွရှေငျးဖို့ နညျးလမျးမရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားလာတာ၊ အသကျအန်တရာယျထိအောငျလုပျခငျြလာတာ စတာတှကေို ထုတျပွောလာတတျပါတယျ။ အပွုအမူ ပွောငျးလာရာမှာလညျး၊ ယခငျ အရကျ၊ မူးယဈဆေး မသုံးသူတှအေနနေဲ့ စ သုံးလာတာ၊ ယခငျသုံးပွီးသားသူတှအေနနေဲ့လညျး ပိုသုံးလာတာ၊ လူတှနေဲ့ ရောရောနှောနှော မနတေော့တာ၊ တခြို.မှာ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှကေို လိုကျပွော၊ နှုတျဆကျတာ၊ တနျဖို့းရှိတဲ့ ကိုယျပိုငျပစ်စညျးတှကေို ပေးလိုကျတာ၊ အဆုံးစီရငျဖို့နညျးလမျးတှကေို စဉျးစားရှာဖှလောတာ စတာတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ ခံစားခကျြပွောငျးလာရာမှာတော့ စိတျဓာတျကလြာတာ၊ စိုးရိမျစိတျမြားလာတာ၊ အရငျလုပျနကြေ အလုပျအပျေါ စိတျမဝငျစားတော့တာ၊ စိတျတို ဒေါသကွီးတာ စတာတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။ တခြို. စိတျကရြောဂါရှိနပွေီးသူမှာတော့ အဆုံးစီရငျဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြ ခအြပွီး၊ ရုတျတရကျပွောငျးသှားတာက၊ ခကျြခငျြးပုံမှနျပွနျကောငျးသှားတဲ့ပုံစံမြိုးနဲ့လညျး ပွတတျပါတယျ။ အခုလို ကွိုတငျလက်ခဏာတှပေျေါလာခြိနျမှာ အဓိကအရေးကွီးတာကတော့ ကိုယျ့ကိုယျကို အဆုံးစီရငျခွငျးအားဖွငျ့ ခံစားနရေတဲ့ ပွဿနာတှကေို တကယျတမျး မှနျမှနျကနျကနျ မဖွရှေငျးနိုငျတာကို အသိဝငျဖို့ပါ။ ပွဿနာက ခုလိုကဉျြးထဲကွပျထဲရောကျခြိနျမှာ လူနာအနနေဲ့ ဆကျနမေလား၊ မနဘေူးလားဆိုတဲ့ အဖွူအမဲသဘော (၂) လမျးကိုဘဲ စဉျးစားမိလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီ (၂) လမျးကွားထဲမှာ သငျ့တျောမှနျကနျတဲ့ အခွားနညျးလမျးတှရှေိနသေေးတာကို စဉျးစားရ ကွပျနတေတျတာမို့၊ အခုလိုအခကျအခဲဖွဈလာခြိနျမှာ ဖှငျ့ဟတိုငျပငျနိုငျသူတှနေဲ့ တိုငျပငျဖို့ အထူးအရေးကွီးပါတယျ။
ပတျဝနျးကငျြအနနေဲ့လညျး လူနာအခွအေနပေျေါမူတညျပွီး၊ အဓိက အကွောငျးရငျးဖွဈတဲ့ စိတျကနျြးမာရေးပွဿနာ ရှိနတေယျလို့ သံသယရှိလြှငျ (သို့မဟုတျ) စိတျကရြောဂါ ရှိခဲ့ပွီးသားဖွဈလြှငျ တတျကြှမျးနားလညျသူတှနေဲ့ ပွသ၊ ကုသမူခံယူနိုငျဖို့ ဖေးမကူညီ ဖြောငျးဖပြေးသငျ့ပါတယျ။ တခြို.လူနာတှမှော တခွားလူတှသေိကုနျမှာစိုးပွီး နောကျတှနျ့ကာ ကုသမူမခံယူလြှငျ အသကျအန်တရာယျ ထိခိုကျသညျအထိ နောကျဆကျတှဲ ပွဿနာတှေ ပိုဆိုးလာနိုငျပါတယျ။ ဒီလူနာတှမှော အထကျဖျောပွပါ ကိုယျ့ကိုယျကိုအဆုံးစီရငျစနေိုငျတဲ့ အခွားအကွောငျးရငျး ပွဿနာတှရှေိနလြှေငျလညျး လိုအပျသလို ပံပိုးကူညီပေးသငျ့ပါတယျ။ လတျတလော အဆုံးစီရငျဖို့ ရှိလာလြှငျလညျး ဖြောငျးဖပြေးတာ၊ တားဆီးပေးတာ၊ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမူ ရနိုငျတဲ့နရောချေါသှားပေးတာ၊ ပိုလိုအပျတဲ့ အကူအညီပေးတာတှေ လုပျပေးခွငျးဖွငျ့လညျး အတိုငျးအတာတဈခုအထိ အခုလို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အဆငျ့မရောကျအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ဒီအကွောငျး ပိုမိုသိရှိနားလညျနိုငျဖို့ စိတျကနျြးမာရေး အထူးကုနဲ့ မွနျမာနိုငျငံ စိတျကနျြးမာပညာအဖှဲ့၊ ရှေးကောကျခံ ဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာစိုးမငျး ကို ဆကျသှယျမေးမွနျး ဆှေးနှေးတငျပွထားပါတယျ။